धरानको लक्डाउनमा हाइकिङ | संस्मरण | वसन्त थापा | दशैं साहित्य विशेष
बज्र गिरे जसरी आयो ‘लकडाउन’, हठात् र अचानक । भोलि ६ः३० बजे बिहानदेखि ‘लकडाउन’ हुने भन्ने समाचार थाहा पाउँदा इटहरीमा थिएँ म एउटा रेस्टुराँमा । विराटनगरबाट धरान फर्कंदै थिएँ र रोकिएको थिएँ खाना खानलाई । रातिको ८ः३० बजेको थियो त्यो समाचार कानमा पर्दा ।
दिन छँदै थाहा पाएको भए केही गरिन्थ्यो होला र रातसाँझ गरेर भए पनि काठमाडौं फर्कने कुनै जुक्ति निस्कन्थ्यो होला । तर त्यति राति के गर्ने ? कुनै तयारीको सम्भावना बिल्कुलै भएन । घरायसी कामले धरान आएको दुई हप्ता बितिसकेको थियो ।
अब ‘लकडाउन’ भन्ने यो नयाँ झ्याउलोले गर्दा बसाइ अर्को एक हप्ता लम्बिने भएको थियो । आत्तिएर वा छट्पटिएर केही हुनेवाला थिएन । आई त सकेको थियो ‘लकडाउन’, जे होला बेहोर्नै पर्‌यो । एक हप्ता त हो बिताइदिउँला भन्ने लाग्यो ।
मलाई कुनै पिरलो थिएन । काठमाडौं दौडेर आई कुनै कुरा जित्नु थिएन न त धरान बस्नाले कुनै कुरा गुमाउनु नै पर्ने थियो । बरू लकडाउन नामको यस कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्ने सुर कसें । विचार गरें धरान वरिपरिका भ्याउन सकिने डाँडाकाँडा र पाखापखेरोमा ‘हाइकिङ’ जाने । जानलाई मनग्गे ठाउँहरू थिए ।
धरानमै हुर्केबढेको र सारा किशोर वय अनि प्रारम्भिक जवानी यहीं बिताएको भए पनि ती पहाडहरू मेरालागि अज्ञातस्थल थिए र रहँदै आएका छन् । यसो त म वर्षमा दुई–तीन पटक धनकुटा हिंडेर जान्थें, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर घुम्ने नाममा हामी खूब टाढा हिंडेर जाने भनेको कि त साँगुरी भञ्ज्याङ थियो कि भने सेउती खोलाको शिर शिवजटा ।
सबभन्दा ठूलो ‘एडभेञ्चर’ चाहिं नारायण पोख्रेल (पण्डित छविलालका कान्छो छोरा) को उल्क्याइमा लागेर एकपटक गोविन्द बोहोरा (पछि विकल) र मैले गरेको शिवजटादेखि ठाडै माथि काम्फेकको पहाड उक्लेर डाँडैडाँडा साँगुरी भञ्ज्याङ पुगी चिउरीबासको ओरालो हुँदै फुस्रेबजारसम्मको एकदिने यात्रा ।
चैत–वैशाखको गर्मी, भोकै प्यासै, त्यति लामो बाटो । बाटामा नारायणले गरेको बदमासीको कथा त छुट्टै छ, जो कुनै दिन सुनाउँला । अहिले सम्झँदा लाग्छ त्यो पागलपनको हद थियो । शायद हामी भेडेटार हुँदै गएका थियौं साँगुरीतर्फ । तर उसबेला भेडेटारको के हस्ती ? कसले पुछ्ने भेडेटारलाई ? धनकुटा जाने सडक बनेर पो हाइ हाइ भएको छ भेडेटारको । यो लकडाउन मैले यहाँका डाँडापाखाहरूको विचरण गरोस् भनेर नै आएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो र सानैदेखि देखिराखेको तर पाइला टेक्ने अवसर कहिल्यै नमिलेको ती ठाउँहरू घुम्न जाने सुर कसें । यसनिम्ति मैले रोजें सर्दुखोलाको पश्चिम किनारबाट ठाडिएको डाँडो । त्यस डाँडाको एकदम उत्तरतर्फको भागमा रहेको शूलीकोट बाहेक त्यहाँका बस्तीको नाउँ पनि मलाई थाहा थिएन ।
भेडेटार । तस्वीरः इन्टरनेट
मेरा लागि त्यो समुच्चा इलाका बेनामे थियो । कालीखोला बगेर आउने पाखा भन्नेसम्म थाहा थियो । सानो छँदा कालीखोला गइरहने भए पनि मास्तिर जाने कहिल्यै हिम्मत भएन । बाक्लो जंगल देखेरै डर लाग्थ्यो । खासै आउजाउ र सरोकार थिएन त्यस इलाकासित हाम्रो जीवनको । बस्ती पनि त त्यहाँ उस्तो थिएन त्यहाँ । दुईचार वटा छाप्रा थिए, राति टिम टिम बत्ती देखिन्थ्यो । कहिलकाहीं आगोको पुल्ठो यताउति चलेको देख्थ्यौं र त्यसलाई हामी राँके भूत चलेको भन्थ्यौं । अचेल पूरै डाँडाको पाखामा घरहरू छन् । खनजोत गरेर बाली लगाइएको छ । कच्ची सडक पुगेको छ ।
त्यस डाँडाको झन्डै थाप्लाकै नजिक बनेको एउटा झिल्के घरले मेरो ध्यान तानेको थियो । कहिले त्यसलाई बादलको पर्दाले छोप्थ्यो, कहिले त्यस घरमा मात्र घामको ‘स्पट लाइट’ पर्थ्यो, कहिले हुस्सुमा हराउँथ्यो अनि फेरि देखा पर्थ्यो । त्यही डाँडाको दक्षिणी थुम्को अचेलभरि प्याराग्लाइडिङ थालिने थलो बनेको पनि सुनेको थिएँ । त्यस ठाउँमा पनि म पुग्न चाहन्थें ।
लकडाउन भए पनि शहरबजारमा पो घुम्न भएन, वनपाखामा घुम्नाले के हानि होला भन्ने ठानेर लकडाउन लागू भएको दोस्रो दिन नै सर्दुखोला पश्चिमको त्यो डाँडो चढ्ने मन बनाएँ । साथी गर्नलाई पत्रकार भाइ गोपाल दाहाललाई गुहारें । ऊ भित्री बाटो हुँदै चतरालाइनबाट बिहानै जिरो प्वाइन्टमा आइपुग्यो र पुलिसको नजरबाट बच्दै हामी बाटो लाग्यौं । सात बज्दा त हामी सर्दुखोलामा बनेको नयाँ झोलुङ्गे पुल तरेर पारि पुगिसकेका थियौं ।
सर्दुको पूरै हुलिया चिन्न नसकिने गरी बदलिएको पाउँछु । नबदलियोस् पनि किन ? भयो होला केही नभए पनि ५४/५५ वर्ष म यतातिर नआएको । खोलाको नाममा छिपछिपे कुलो जस्तो पानी बगिरहेको छ । खयरका रूख, बयरका झ्याङ, सिवाँली र असारे काँडाका रूख तथा अरू बुटा बुट्यानको झाडी भएका बगरमा दुवैतिर बाल्लो बस्ती बसेको छ । त्यसलाई जोगाउन तटबन्धको निर्माण भएको छ ।
भन्नलाई त सुकुम्बासी भन्छन् यहाँ बस्नेहरूलाई । तर यिनीहरू वास्तवमा हुकुमवासी हुन् । संगठित र शक्तिशाली छन् यिनीहरू, पार्टीहरूका भोट ब्याङ्क हुन् । यिनीहरूको भोट निर्णायक हुन सक्छ । यसो त शहरी विकास र सुकुम्बासी बस्ती एकअर्कासित अविभाज्य तवरमा गाँसिएका छन् जस्तो शरीर र शरीरको छायाँ । शहरको साइज अनुसार सुकुम्बासीको बस्ती पनि बढ्छ । नेपालका ठूला साना हरेक शहर र नगरको हिस्सामा परेको छ सुकुम्बासी बस्ती । धरान अग्रस्थानमा परेको छ यस मामिलामा । सर्दुको पुछार जंगलको मुखसम्मै, पूर्वपट्टि सेउती खोला पूरै, धरानको माझमा रहेको खहरेको बगर र अरू पनि चेपचाप सुकुम्बासीको कब्जामा परेको छ र धरान सुकुम्बासीहरूका लागि ‘हटस्पट’ बनेको छ ।
सर्दु खोलाको जुन ठाउँमा अहिले झोलुङ्गे पुल बनेको छ त्यसको ठीक पारिपट्टि ठूलो करमको रूख थियो जस्तो लाग्छ । ठूला झन्डै गोलाकार पात हुने त्यस रूखमुन्तिर धेरै पटक ओत लागेको थिएँ पानी पर्दा सानोमा । त्यहाँ अहिले उभिएको रूख त खरानेको रहेछ । मैले ठाउँ बिराएको हुनसक्छ वा करमको रूख ढालिएको हुनसक्छ । त्यस ठाउँबाट कालीखोला पुग्नलाई पनि सानोतिनो पहाड नै उक्लनुपर्थ्यो । तर मोटर बाटोले ढिस्काहरू ताछिएको कारणले होला केही कदममै कालीखोला पुगियो । बिचरा ! नाम मात्र कुनै यत्नले थामेर बसेको छ कालीखोला । सानो पानी बग्छ तिर तिर गरेर ! हामी बर्खामा पौडी खेल्न र हिउँदमा गँगटा अनि बुधुना माछा मार्न जाने गथ्र्यौं कालीखोलामा । एक पटक बर्खामा पहिरो गएर ठूलो ढिस्को खस्नाले काली खोलामा भव्य दह बन्न गएको थियो । हाम्रो त्यस सालको ठूलो स्वीमिङ पुल भएको थियो त्यो दह । त्यहीं हामीले डाइभ मार्न सिकेका थियौं र दह कसले छिटो पार गर्ने भनेर होड पनि हुन्थ्यो हामीबीच । अहिले त बरा कालीखोलाको यो हविगत भएछ । नहोस् पनि किन, मूल फुट्ने ठाउँहुँदो बस्ती बढेपछि !
जे होस्, केही भाग कच्ची मोटर बाटो र केही भाग पुरानो पैदल बाटो गर्दै हामी उकालो लाग्यौं प्याराग्लाइडिङ हुने थलोलाई लक्ष्य बनाएर । त्यति समय लागेन त्यहाँ पुग्न जस्तो मैले अनुमान गरेको थिएँ । धरानतिर फर्केको पहरो भएको त्यस थुम्कोलाई चिन्डे डाँडा भन्न थालेका रहेछन् अचेल मानिसहरूले । यसको भौतिक स्वरूप चिन्डो आकारको भएको हुनाले यो नाउँ परेको भन्छन् कोही । कोही भन्छन् चिन्डे तालु जस्तो देखिने हुनाले यो नाउँ रहन गएको । बजारकाले चिन्डे नाउँ दिए पनि गाउँका रैथानेहरू चाहिं यस ठाउँलाई रमिते डाँडा भन्न रुचाउने कुरा गोपालले सुनायो । उसैले बताए अनुसार नाम र यस ठाउँको उपयोगलाई लिएर यस भेगका राई र तामाङ समुदायबीच ठूलै विवाद चर्केको थियो रे एकपटक । पत्रकारसित घुम्न निस्कँदा हुने फाइदा भनेकै यही हो । केही न केही जानकारी उनीहरूको पोल्टामा रहेकै हुन्छ । त्यसले गर्दा हिंडाइ पनि रोचक हुन्छ ।
असली नाउँ जे भए पनि त्यस ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ गतिविधिका कारण र त्यस ठाउँबाट देखिने धरानको ‘वाइड इगल भ्यू’ का कारण चल्तीफिर्ती बढेको बुझिन्थ्यो । त्यहाँ रहेका रेस्टुराँ र पसलहरू त्यस कुराको प्रमाण थिए । यद्यपि लकडाउनका कारण ती बन्द थिए हामी जाँदा ।
चिन्डे डाँडाबाट हेर्दा थाहा हुन्छ धरानको फैलावट । यो अब नगर मात्र कहाँ रह्यो र ! पूरै शहर बनिसकेको देखिन्छ पाखा, ढिस्का, खोल्सा, बगर, वन केही बाँकी नराखी अटेसमटेस घरहरू बनेका देख्दा । थाहै नपाई धरान नीलो र रातो रंगको जस्तापाताको शहर बनेको छ । लगभग सात दशक अगाडि धरानको जनसंख्या केवल चार हजार चानचुन थियो भनेर कसले कल्पना गर्न सक्छ ?
चिन्डे डाँडा छाडेर हामी उकालो लाग्यौं अर्को बस्तीतिर । अमरहाट छेउको घरबाट मैले सधैं देखिरहेको चहकिलो झिल्के रंगको घर त्यसै बस्तीमा थियो र म त्यस घरलाई नजिकबाट हेर्न चाहन्थें । बाघखोप भन्दारहेछन् त्यस बस्तीलाई । त्यसबाट कुनै समय यो ठाउँ बाघको वासस्थल थियो बन्ने बुझाउँछ । यसको पश्चिमतर्फ तल गहिरामा भालुखोप नाउँको अर्को बस्ती छ । त्यसको अर्थ पनि स्पष्ट छ । वन्यजन्तु विचरण गर्ने बेलाको सम्झना दिलाउने नाउँ हुन् यी । बाघखोपको त्यो चहकिलो रंगको घर अरबको कुनै मुलुकमा काम गरेर आएको मनिसले बनाएको थाहा भयो ।
धेरै महत्वाकांक्षी उद्देश्य बोकेर गएका थिएनौं हामी । त्यसैले त्यसदेखि मास्तिर निर्जन देखिने वनसहितको पहाडको थुम्कोले हामीलाई आऊ आऊ भनेर डाके झैं लागे पनि हामीले बाघखोपलाई नै अन्तिम मुकाम बनायौं । त्यहाँबाट मास्तिर जानेतिर लागेनौं । उँचाइ एक हजार मिटरभन्दा केही बढी मात्र भए पनि बाघखोप निकै शीतल थियो ।
बाघखोपकै एउटा दोकानमा जे जे मिल्यो खात्रकखुत्रुक खाएर हामीले दिउँसोको छाक टा‌र्‌यौ । त्यसरी खाजा खाँदै गर्दा हाइकिङको मेरो ‘वीस लिस्ट’ गोपाललाई बताएँ । कुनै बेला भालुखोप, माछामारा जाने, शूलीकोटको ढाडपट्टिबाट महाभारत लेकको सिउरैसिउर साँगुरी भञ्ज्याङ पुगेर चिउरीबासको बाटो माथ्लो सर्दु हुँदै धरान निस्कने । भेडेटारबाट पैदल साँगुरी पुगी धारापानी गाउँ हुँदै लेउती खोला किनारको माखामा फेदी ओर्लने । साँगुरी वारिपारिको पैदल यात्रा धरान–धनकुटाको बाटो एकफेरा ‘रिभिजिट’ गर्ने मेरो चाहना थियो, परेमा कतै बास नै बस्ने गरी ।
मेरो प्रस्तावित पैदल घुमाइमा आफूले साथ दिने र अचेलभरि ठाउँहेरी ‘होम स्टे’ को सुविधा पनि मिल्ने कुरा गोपालले बतायो । मेरो हिसाबमा आउँदो बर्खायामतिर या बर्खा लगत्तै फेरि धरान आएर ती ठाउँहरूमा जाने विचार रहेको बताएँ । बर्खाको पानीले नुहाएर काँचुली फेरेका पहाड र पाखाहरू स्विट्जरल्यान्ड भन्दा केही कम नदेखिने मेरो ठम्याइ छ । फरक कति मात्र हो भने उनीहरूले आफ्नो देश स्याहारेर जोगाएका छन् र हामी आफ्नोलाई बिगार्न कम्मर कसेर लागेका छौं ।
यिनै तर्कनाका साथ हामी बाघखोपबाट केही तेर्पन र केही ओरालो बाटो भएर कालीमाटी नामको तामाङ बस्ती पुग्यौं, जहाँ एकजना भाइको गफमा अल्मलिएर निकै समय गुजार्‌यौं । तर पथप्रदर्शन गरेर तिनले हामीलाई सघाए पनि । नत्र हामी जंगलको भुलभुलैयामा पर्ने निश्चित थियो । अनि सालबोटे नामको मूलतः राई बस्ती हुँदै एउटा सेलरोटी पकाएर फेरि सर्दुको त्यही झोलुङ्गे पुल भए ठाउँ आइपुग्दा साँझको पाँच बजिसकेको थियो ।
आशा गरे जस्तो एक हप्तामा लकडाउन हटेन, बरू थपियो अर्को दश दिनका लागि । झन् कडा पारिंदै गयो लकडाउन । बिहान घुम्न निस्केकालाई लक्ष्य गरी पुलिसको गस्ती आउन थाल्यो । मानिसलाई लौराले पिटीपिटी घिच्याउँदै भ्यानमा कोचेर लगेको र दिनभरि हाईस्कूलको ग्राउन्डका ठिङ्गुर्‌‌याउने गरेको कुरा म सुन्थें । भाग्यवश, पुलिस ज्यादतीबारे मैले सुन्न मात्र पर्‌यो, आफैंले भोग्न भने परेन ।
गोपाल दाहाल काम गर्ने दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन रोकिएकोले ऊ पनि लाग्यो परिवारसहित आफ्नो घर बराहक्षेत्रतिर । घुम्न जाने साथी नहुनाले र पुलिसको सक्रियता बढ्नाले फेरि कतै हाइकिङमा जाने संभावना भएन ।
तर रोजै बिहान घरबाट आधा घन्टाको हिंडाइमा पुगिने पञ्चकन्याको डाँडामा जान्थें अनि सालको वनबीच प्राणायाम र योगाभ्यास गरिटोपल्थें । मेरा बितेका दिनका कैयन् रमाइला नरमाइला स्मृतिहरू गाँसिएका छन् पञ्चकन्याको वनसित । घना थियो त्यो वन उसबेला, सालका रूख बाहेक अरू कुकाठका रूखहरू पनि प्रशस्त थिए । यो पातलिएको छ मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेर । वनको भित्री भागतिर धुरीको बलो हुने साइजका हुर्कंदै गरेका सालका रूख यही लकडाउनको मौका छोपेर निर्दयतापूर्वक काटिएका पाइन्छन् । मानिसको जनसंख्याको साइज बढेसँगै वनजंगल, नदी–नाला, खोला–बगरको साइज द्रुततवरले घटिरहेको अहिलेको बेलाकालमा पञ्चकन्याको वन धन्न यति भए पनि जोगिएको छ, त्यसैमा सन्तोष मान्नु परेको छ ।
धेरै दिनदेखि सधैं बिहान ६ बजेतिर उकालो लाग्ने गरेको मलाई देखिरहेकी अमरहाटकी एकजना गृहिणीले एक बिहान “अंकल, तपाईं त लक्की भएर अहिलेसम्म जोगिनुभएको छ । यहाँबाट कतिजनालाई पुलिसले पिट्दै लगेको मैले देखेकी छु । हिजो मात्र यहींको गुरुङ बडालाई पनि मर्नु गरी लट्ठीले पिट्यो । नआउनोस् यता अंकल” भनिन् ।
हुन पनि कुन मानिस के कति जरूरी कामले हिंडिरहेको छ, अस्पताल वा औषधि पसल पो गइरहेको छ कि, कुनै आपतमा पो परेको छ कि त्यो नसोधी पहिले डण्डा लगाउने अनि सोध्ने तरिका थियो पुलिसको । बिहान दूध बाँड्न र तरकारी बेच्न दिने अनि किन्न जानेलाई हिर्काउने गर्थ्यो पुलिस । यो तरिका बर्बर थियो । तर कसलाई भन्ने र कसले सुन्ने ? हरामके आगे राम डरे । किन व्यर्थै झमेलामा फँस्ने र लौरो हातमा पाएर आफुलाई राजा हौं भन्ने भएका यी मूढहरूको शिकार किन हुने भनेर झन्डै दुई हप्ता प्रातः भ्रमणको कार्यक्रमलाई मुल्तबी राखेर घरको आँगनबाहिर खुट्टा पनि राखिनँ ।
फेरि सरकारले अर्को एक हप्ता थप्यो लकडाउन । उता इन्डियाले पनि थपिरहेको थियो लकडाउनको अवधि । इन्डियाकै चालमा हिंड्ने सरकारको चाला देख्दा अब भने लकडाउन लामै तन्किने छाँट देखियो । लकडाउन कति थपियो भनेर हिसाब राख्नुको पनि कुनै अर्थ रहेन ।
लकडाउनको प्रभावले हो वा कुन कारणले हो उता प्रकृतिले आफ्नै करिश्मा देखाउँदै थियो । वैशाखको पहिलो हप्तामै मनसुन आए झैं पानी पर्न थालेको थियो । मध्य बर्खा आएसरी महाभारत लेकको पूरै लहरलाई कालो बादलको बाक्लो पत्रले छोपेको हुन्थ्यो । एकदिन त निकै बाक्लो हुस्सु अमरहाटलाई छोप्न आइपुगेको थियो पञ्चकन्या डाँडाबाट ओर्लेर । अचम्मको जाडो समेत ल्यायो त्यसले । यसरी पानी पर्नाको नतिजा के भयो भने केवल तीन हप्ताअघि धुस्रो, फुस्रो, उजाड उजाड र फुङ्ग देखिएका पहाडहरूको अनुहार एकदमै बदलिएर हरिलो भरिलो भयो । मानौं पहिलेको झुत्रो मजेत्रो फालेर प्रकृतिले हरियो उज्यालो पछ्यौरा ओढेको थियो । प्रकृतिको मन लोभ्याउने स्वरूप प्रकट भएको थियो ।
एकातिर प्रकृतिको यस्तो प्रबल आकर्षण थियो र अर्कोतिर घरमा कुच्चिएर बसेको पनि धेरै दिन भइसकेको थियो । मनले केही फरक कुरा हेर्न र खुट्टा तन्काउनलाई खुला ठाउँमा जान खोजिरहेको थियो । दुई जना साथी तयार भए मलाई साथ दिन– किशोर वयको साथी डम्बर बुढाथोकी र अच्युत पराजुली भाइ, मैले पढेको भगवती मिडिल स्कूल (अहिले माध्यमिक) का हालका प्रधानाध्यक ।
सेउती पारिको दानाबारी, पत्रुङबारी जुन जुन बारी पुगिन्छ जाने र दिनभरि घुम्ने मनसुबा लिएर निस्क्यौं एक बिहान हामी तीन जना । आखिर जहाँ पुगे पनि मेरा लागि त्यो नौलो प्रदेशको घुमाइ हुनेथियो । अमरहाटबाट सेउतीको पुलसम्म त कसैको रोकटोक बेगर पुग्यौं ।
यात्राको शुरूआत निरापद भएकोमा हामी खुशी थियौं । तर त्यो खुशी तुरून्तै बिलायो सेउती खोलाको झोलुङ्गे पुलको मुखैमा दुई जना मुस्तन्डे प्रहरी लामो डन्डासहित उभिएको पाएर । उनीहरूले हामीलाई उल्टै खुट्टा फर्किन लगाए । तर हामी पनि कृतसंकल्पित थियौं । त्यसैले फर्केर विजयपुर पुग्नु साटो उकालो लागेर छिर्यौं पञ्चकन्याको वनभित्र । सेउतीतर्फको पाखोबाट माउन्टेन बाइकिङको डगर पछ्याउँदै पुग्यौं भताभुङ्गे राजाको दरबार भग्नावशेष भएको स्थलमा ।
धरानसित भताभुङ्गे राजाको दरबार र त्यसको किंवदन्ती घनिष्ठतवरले जोडिएको छ । पुरानो आहान छः ‘भताभुङ्गे राजा, लथालिङ्गे काजी, सत्यानाश बिचारी’ । तिनको राज्यव्यवस्थाको कानून साधुलाई शूली र चोरलाई चौतारा दिने खालको थियो रे ! शूली चढाएर प्राणदण्ड दिने ठाउँ चाहिं सर्दु खोलापारि डाँडाको पाखा भएकोले त्यसको नाउँ शूलीकोट भएको रे !
यस्ता रे रेको कथा हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका थियौं । इतिहासको कुन कालखण्डमा त्यस्ता व्यक्ति राजा बनेका थिए ? तिनी साँच्चिकै ऐतिहासिक व्यक्ति थिए वा किंवदन्तीमा आधारित काल्पनिक हस्ती ? विजयपुर राजधानी थियो भने डाँडाको उत्तरी छोरमा त्यति पर दरबार किन बनाए ? के हालको वन दरबार पाताल भएपछि उम्रेको हो ? दरबारको खानेपानीको स्रोत कहाँ थियो ? तिनका भाइभारदार र सेनामेना कहाँ बस्थे ? के शूलीकोटमा साँच्ची नै अपराधीलाई शूलीमा उनेर प्राणदण्ड दिइन्थ्यो ?
भताभुङ्गे राजाको दरबार भनिने किरातकालिन विजयपुर दरबार । तस्वीरः खुलापत्र डटकम
कसैको भनाइमा बुढासुब्बा मन्दिर यिनै राजाको समाधि हो । फेरि कोही विद्वानहरू गोर्खालीहरूल विजयपुर कब्जा गर्दा त्यहाँका राजा रहेका बुद्धिकर्ण रायको समाधि हो बुढासुब्बा भन्छन् । डा. हर्क गुरुङले त्यही कुरा लेखेका छन् आफ्नो भ्रमण वृत्तान्तमा । के त बुद्धिकर्ण राय नै भताभुङ्गे राजा हुन् ? या भताभुङ्गे राजा नै बुढासुब्बा हुन् ? एकताका यहाँ बाक्लो अग्लो पर्खाल र गारोका अवशेष बाँकी थिए । चिनिएका, बाक्ला र चारपाटे ढुङ्गाका चप्लेटीहरू असरल्ल थिए त्यहाँ । समयान्तरमा एक एक गर्दै ती हराए । शायद कसैको घरको जगमा पुरिए वा पर्खालको हिस्सा बने । खासमा यस्तो स्थलको पुरातात्विक उत्खनन् हुनुपर्ने हो । यस विषयउपर गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नगरी यस ठाउँलाई तारको बारले घेरेर किराँतहरूको पूजास्थल बनाइएको छ ।
सुन्दछु, यस ठाउँमाथि हकदाबी गर्न राई र लिम्बू समुदायको हानाथाप छ । इतिहास र राजनीतिमा जब धर्मले प्रवेश गर्दछ त्यसको ककटेल बडो अनिष्टकारी हुन्छ । तथ्य पाखा लाग्छ र त्यसको ठाउँ काल्पनिक कथ्यले लिन्छ । बरा, भताभुङ्गेको इतिहास पनि भताभुङ्ग भएको पाउँछु ।
केहीबेरको विश्राम र यस्तै गन्थन–मन्थनपछि हामी तल सरंगा झ¥यौं । खासमा यस ठाउँलाई सरंगाद्वार भनिन्थ्यो पहिले । तर धनकुटा जाने सडक बनेपछि यो ‘बेस क्याम्प’ भएको छ । यहाँबाट भालुखोला हुँदै भोर्लेनीको डाँडा उक्लन सकिन्थ्यो वा शिवजटातिर हानिन सकिन्थ्यो ।
हाम्रो समयमा वनजंगलबीचको गोरेटो मात्रै भएको ठाउँमा अचेलभरि मोटर सडक नै जान्छ । तर गाउँ र जंगल पस्ने गौंडा–गौंडामा मानिसलाई हिंड्नडुल्नबाट रोक्न प्रहरीहरू तैनाथ रहने गरेको सुनेका मात्र होइन सेउतीको पुलमा भोगि पनि सकेका थियौं । त्यसैले भालुखोलातर्फ नलागी ठाडो उकालो लाग्यौं शिखरबासतर्फ । हामीलाई जहाँ भए पनि जानु थियो र हाम्रो सरोकार खास ठाउँ पुग्नुसित होइन हिंड्नुसित थियो ।
गाउँलेको निर्देशन अनुसार हिंड्न नजानेर कुबाटोमा परियो केही बेर र अप्ठेरो भयो बाटो पैल्याउनलाई । बाटो फेला परेपछि भने शिखरबासको उकालो पनि सुबिस्ता लाग्यो । ठाउँ ठाउँमा चौतारी बिसौनी र पानीको कुवा भएको यो बाटो साबिकको मूल बाटो थियो चौबीसे, बुढी मोरङ, डाँडाबजारतिरबाट नूनतेल लिनलाई धरान झर्नेहरूको । मैले कल्पना गरें सुरेश सुब्बाजस्ता चौबीसेका मेरा साथीहरूलाई यही बाटो पढ्नलाई धरान झरिरहेका ।
नाउँ सुहाउँदो ठाउँ रहेछ शिखरबास । प्रकृतिले नै ठाडो उकालोलाई ब्रेक दिंदै जमीनलाई उबडखाबड भए पनि केही हदसम्म सम्याएर बनाएको ठाउँ । टाउकोमाथिबाट घाम र पेटभित्रबाट भोक बलिरहेकोले यस ठाउँमा रोकियौं पेट पूजा र सुस्ताउने विचारले । गाउँघरमा अचेल खान पाइने भनेको त्यही सर्वव्यापक मसलायुक्त चाउचाउ हो– खाए पनि, नखाए पनि । बन्द राखिएको पसलकी साहुनीलाई त्यही उमाल्न लगाएर क्षुधा शान्त पार्यौं र फेरि उकालो लाग्यौं ।
यहाँबाट डाँडाको नाकको जुन गोरेटो हामीले समात्यौं त्यो बेचल्तीको निस्क्यो– काँडाघारी र चिहानघारी भएर जाने । फर्किने कुरा भएन, कष्टपूर्वक भए पनि उकालो चढिरह्यौं र जहाँ उकालो सकियो त्यस ठाउँमा पुगेपछि राहतको सास फेर्दै डम्बरले भन्यो, “यही हो ‘बिग बुद्ध’ को निर्माणस्थल । छोटी मोरङ भन्छन् यस ठाउँलाई ।” हङकङमा छ एउटा उच्च स्थलमा बनेको ‘बिग बुद्ध’ । त्यसैको देखासिकी हुनसक्छ एउटा समूहले ‘बिग बुद्ध’ को योजना अघि सारेका छन् । त्यहाँ यस्तो आयोजना ल्याउन ठीक छ र ठीक छैन भन्ने विवाद पनि अगाडि आएको छ । ‘बिग बुद्ध’ को प्रतिमा बन्ला या नबन्ला त्यो भविष्यले नै बताउला ।
सानै छँदादेखि सुन्दै आएको छोटी मोरङ भन्ने ठाउँमा आजैको दिन आउन जुरेको रहेछ भन्ने लाग्यो । यो त भयो छोटी, चौबीसेमा बुढी मोरङ पनि छ । त्यो चाहिं धनकुटा जिल्लामा पर्छ ।
उता तराईमा मोरङ नाउँको जिल्ला छ, यता पहाडमा छोटी र बुढी मोरङ नाउँका स–साना इलाका छन् । बुढी त मेरो अनुमानमा ‘बडी’ अपभ्रंश भएर बनेको हुनुपर्छ । छोटी भनेको सानो भइहाल्यो ।
धरानमा पहिले रहेको हुलाक कार्यालयलाई पनि विजयपुर छोटी हुलाक भनिन्थ्यो, सानो तहको हुनाले । तर मोरङको नाउँ कसरी जोडिए पहाडका यी ठाउँसित भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा रहेको हुनुपर्छ र मेरो मनमा पनि रहँदै आएको छ ।
चिण्डेडाँडा । तस्वीरः ब्लेस तामाङ, फेसबूक
के मोरङ जोडिएका ठाउँ अन्यत्र पनि छन् ? मोरङले निकै ठूलो भूखण्डलाई जनाउँथ्यो ऐतिहासिक कालमा । सुनसरी जिल्ला मोरंगबाटै काटेर बनाइएको हो । त्यो धेरै अघिको कुरा होइन । माओरोहाङ नामक किराँत राजाको नाउँबाट मोरङ नाउँ रहन गएको भनिन्छ । माओरोहाङको समय त इसाको सातौं शताब्दी बताउँछन् विद्वानहरू । अर्थात्, यस क्षेत्रमा गोर्खालीहरूको आधिपत्य हुनुभन्दा ११०० वर्ष अगाडि । इतिहासवेत्ता विद्वानहरूबाट यस जिज्ञासालाई शान्त पार्ने काम हुनेछ भन्ने आशा गरौं ।
हाम्रो अर्को विश्रामस्थल बन्यो नजिकै रहेको एउटा सानो बौद्ध बिहार । त्यहाँका रखवालाले हामीलाई बिहारको दर्शन गराउनुका साथै आफूले लेखेका कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाए । हिंडाइले लखतरान भएका हामीसित तिनको कविता सुन्नु बाहेक अर्को उपाय पनि भएन । शायद तिनले धेरै समयपछि हामीजस्ता श्रोता पाएका थिए । यस्तो ठाउँमा बसेपछि कविता नलेखेर अरू गर्नु पनि के ?
त्यहाँबाट भेडेटार छोटो दूरीमा भए पनि हामी गएनौं । हाम्रो गन्तव्य थिएन त्यो । त्यसको साटो बरू दाहिनेपट्टि तेर्सो लागेर डोजर खनेको बाटो पछ्याउँदै लाग्यौं भोर्लेनी गाउँको ओरालोतिर । अरू ठाउँमा जस्तै भोर्लेनीको पूरै पाखोमा डोजरले गरेको करामत देख्न पाइन्छ । गाउँ–गाउँमा चलेको यस उद्दाम डोजरतन्त्रलाई मानिसहरूले भूलवश विकास ठानेका छन् जो असलमा विनाश हो ।
भोर्लेनीको ओरालोपछि भालुखोलाको मोटर बाटो हुँदै थकाइ र भोक दुवैले लस्त भएर सरंगा वा बेसक्याम्पमा ढोका आधा खोलिएको रेस्टुराँमा अनुरोध गरेर तिर्खा मार्न पस्दा हामी घरबाट हिंडेको बाह्र घन्टा भइसकेको थियो ।
तैपनि अब हामीलाई हतारो भएन । यद्यपि घर पुग्नलाई मैले कम्तीमा अझै दुई–अढाइ र मेरा मित्रहरूले तीन साढे–तीन किलोमिटर हिंड्न बाँकी थियो । त्यसको हामीले पर्वाह गरेनौं । त्यहाँ चिसो पेय र हतारमा बनाइएको खाजा खाँदै हामीले गरेको यात्राको लेखाजोखा गर्‍यौं र अर्को पटक फेरि कता घुम्न जाने भन्नेबारे छलफल गर्‍यौं ।
वास्तवमा धरानलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर धेरै ठाउँमा हाइकिङ जान सकिन्छ, जोश र जाँगर भएमा । तर अच्युत भाइको प्रस्तावमा हामीले तय गर्‍यौं हाम्रो अर्को पटकको हाइकिङको गन्तव्य – शूलीकोट !